Rooble oo la kulmay bulshada Baydhabo | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble ayaa safar ku jooga magaalada Baydhabo ee xaruta gobolka Baay
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulamo kala duwan la yeeshay madaxda iyo Bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo ee Caasimadda ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed.
Rooble oo shalay safarkiisii ugu horreeyay ku tegay Baydhabo ayaa kulan la yeeshay Golaha Wasiirrada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaalya, isagoo kala hadlay arrimo la xiriira wadashaqeynta dhexdooda ah iyo tan kala dhaxeysa Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
“Waxaan idinku boorrinayaa in aad wadashaqeyn wanaagsan yeelataan, iskana kaashataan howllaha muhiimka u ah dadka aad matashaan iyo tan guud ee Qaranka Soomaaliyeed. Sidoo kale waa in la xoojiyaa wada shaqeynta heer Federaal iyo heer dowlad-gobolleed” ayuu yiri Rooble oo ka hadlayay kulanka Golaha Wasiirrada Koonfur Galbeed oo uu goobjoog ka ahaa Hoggaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen).
Ra’iisul Wasaaraha Rooble ayaa Golaha Wasiirrada Koofur Galbeed kula dardaarmay inay la shaqeeyaan guddiyada doorashooyinka ee heer Federaal iyo Heer Maamul Goboleed, Odayaasha dhaqanka iyo ururrada bulshada ee arrintaas ka shaqeynaya, si loogu guuleysto qabashada doorasho hufan oo caddaalad ah ku dhacda.
Dhanka kale, Ra’iisul Wasaaraha ayaa kulan la yeeshay Odayaasha dhaqanka Magaalada Baydhabo waxa uuna kala hadlay sii xoojinta nabadeynta deegaannada Koonfur Galbeed iyo dagaalka ka dhanka al-Shabaab.
“Odayaasha dhaqanka Koofur Galbeed Soomaaliya ayaan caawa kulan kula yeeshay Baydhabo. Waxaan kula dardaarmay inay sii xoojiyaan kaalintooda ku aaddan nabadeynta, la dagaallanka argagixisada, isku haynta iyo heshiisiinta bulshada” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Rooble oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka.